Natomboka ny famoahana Resort! | Martech Zone
Alahady, Jona 25, 2006 Asabotsy 20 Febroary 2016 Douglas Karr
Rehefa afaka herinandro vitsivitsy tsy natoriana sy ora maro dia nandefa Resort Publications niaraka tamin'ny namako iray aho, Chris Baggott. Ny hevitra dia zavatra noeritreretin'i Chris saingy efa noresahina tamin'ny ankamaroan'ny fidirana bilaogiko aho. Mitohy hatrany ny fitomboan'ny famahanam-bolongana lohahevitra sy bilaogy (bilaogy). Ny Internet dia toy ny mijery eny ivelany eny… ny efitrano misy tranokala fanampiny dia tsy manam-petra ary mitombo haingana sy haingana kokoa. Rehefa mitombo ny tranonkala dia tsy maintsy mihasarotra ny motera fikarohana ary tsy maintsy miady mafy ny tranonkala mba hisarihana ny saina.
Mino aho fa ny valin'izany dia mifantoka amin'ny sain'ny famoahana tena. Ny bilaogy no valiny tonga lafatra amin'izany satria namboarina manokana. Ny fanoharana izay ampiasako amin'ny olona foana dia ny tsy fitovizan'ny fametrahana famantarana eo alohan'ny fivarotanao na ny fivoahana ary ny mangarahara. Ny ankamaroan'ny tranonkala dia 'signage' fotsiny. Tsy avelan'izy ireo hahita ny olona na ny tantara ao ambadiky ny tranonkala ny olona. Mamela anao hiresaka amin'ny olona ny bilaogy ary mamela azy ireo hiverina hiteny.
Resort Publications dia mampiaraka ireo lafin-javatra rehetra ireo amin'ny tranonkala tokana. Foto-kevitra (Resorts). Faritra io (sokajin'ny firenena sy ny toerana misy azy). Ary an'ny tena manokana… nosoratan'ireo olona tompona trano fandraisam-bahiny na nataon'ny olona nitsidika azy io. Manantena izahay fa ny valiny dia tranonkala maimaim-poana malaza be.
Tags: famintinanafamoahana resorttrano fisotroana fisotroanaresortpubs
Aingam-panahy amin'ny marketing